Home Wararka Kaluumeysato ku sugnaa xeebaha Jubbaland oo dooni la qalibantay
Kaluumeysato ku sugnaa xeebaha Jubbaland oo dooni la qalibantay
Sida ay sheegayaan war aanu ka helnay Dowlad Goboleedka Jubbaland, inta la xaqiijiyay shan kalluumeeysato ah ayaa ku geeriyooday xeebaha Gobolka Jubada Hoose kaddib markii ay la qallibantay doon ay saarnaayeen oo dabeeylo ku dhufteen.
Wasiirka Kalluumeysiga Jubaland, Cabbaas Cali Ibraahim ayaa sheegay in dabayshu ay ridday 11 doonyood oo nooca kalluumeysiga ah, kuwaas oo ka jillaabanayay xeebaha Gobolka. Wasiir Cabbaas ayaa sheegay in shilkaas ay ku dhinteen shan ruux oo kalluumeysato ah, kadib markii ay rogmadeen doonyihii ay wateen dadkaas.
Dhanka kale, Wasiirku wuxu tilmaamay in dabayshu burburisay gurya badan oo ku yaalla xaafadda dhanka xeebta xigta ee Calanley (Kismaayo). Wasiir Cabbaas Cali Ibraahim ayaa ugu baaqay dadka ku nool xeebaha Gobolka Jubada Hoose, in ay taxaddar dheeriya ka muujiyaan dabaylaha xooggan ee ka jira xeebta.